Waa Maxay Sababta ay Qadar ugu dhuti doonin go’doominta dalalka khaliijka? – Xeernews24
Waa Maxay Sababta ay Qadar ugu dhuti doonin go’doominta dalalka khaliijka?
9. Juni 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Dalka Qatar waxaa xidhiidhkii diblomaasiyadeed u jaray illaa 9 dal, Qatar waa dal yar oo dadkiisa lagu qiyaaso 2.7 Milyan, waxaa madax ka ah Amiir Tamiim Bin Xamad oo talada qabtay 2013-kii.
Laga soo bilaabo subaxdii Isniinta markii ay dalalka Imaaraadka, Sacuudiga, Bahrain, Masar iyo Yemen xidhiidhka u jareen dalkaasi, waxaa ku soo biiray dalal kale sida Libya, Mauritania, the Maldives iyo Comoros kuwaas oo iyaguna si toos ah dalka Qatar ugu jaray xidhiidhkii diblomaasiyadeed halka Djibouti iyo Jordan ay hoos u dhigeen mataallada xagga diblomaasiyadda, waxaa sidoo kale safiirkeeda u yeedhay dalka Senegal.
Dalka Qatar waxaa hadda saxiib ugu dhaw dalalka Kuwait, Iran iyo Turkiga, inta kale dalalka dariska la ah waa ay jareen, walaaca ugu badan ,
waa sidee ku badbaadi karaan dal iyo dad ahaan?
Ma haystaan keyd ku filan?
Dhinaca kale, xidhiidhka ganacsi ee ka dhaxeeya Khaliijka iyo Qatar waxaa ka badan midka ay Doxa la wagaato caalamka intiisa kale, waxaa ayna carabta oo dhan uga horeysaa suuqa tartanka, horumarka bulsho.
Ganacsiga Doxa iyo Khaliijka dhexmara waxaa uu gaadhayaa 10 Bilyan oo u dhiganta 11% halka iskaashiga dhaqaale ee Qatar iyo dunida dhex mara uu gaarayo 89%.
Dalka Qatar keydka xagga Gaaska ah waxaa uu gaadhayaa 2.4 trillion cubic feet , dalkan Qatar waxaa haystaa 12% keydka Gaaska caalamka, waxaa ka horreeya dalalka Ruushka iyo Iran.
Gaaska noociisa dareeraha ah ee <strong>liquefied natural gas (LNG)</strong> Qatar waxaa ay ku jirtaa kaalinta 1aad caalamka iyada oo soo saarta sanadkii 77 million tones.
Dhaqaalaha Qatar kuma tiirsana oo keliya Tamarta ee waxaa ka badan wax soo saarka aan tamarta ahayn, tusaale ahaan dhaqaalaha uu tamarka ka helo dalkaasi waa 39% , waxyaabaha aan tamarta ahaynna waa 61%.
Dhaqaalaha Aan Tamarta Ahayn:
Mashaariic la xidhiidhdha koobka adduunka waxaa ay ku bixiyeen 98 Bilyan oo Dollar, waxaana la filayaa in sanadkan ay bixiyaan 13 Bilyan oo Dollar.
Xidhiidhka Ganacsi ee Dunida:
Qatar waxaa ay xidhiidh ganacsi la leedahay wadamo badan oo caalamka ah sida: Jaban, Hindiya, Shiinaha iyo dalal kale, waxaase dalalka ugu badan ka mid ah:
Ganacsiga Doxa iyo Khaliijka dhexmara waxaa uu gaadhayaa 10 Bilyan oo Dollar u dhiganta 11% halka dunida iyo Qatar iskaashiga dhaqaale ee dhex mara uu gaarayo 89%.
Dhankeeda dalka Qatar xidhiidhka uma jarin Imaaraadka, waxaa jira in Qatar ay Imaaraadka siiso 30% tamarta dalkaasi laga isticmaalo , iyada oo isticmaaleysa subsea pipeline, oo gaadhaya 364 kilometers (226 miles) kana soo baxa Ras Laffan oo qatar ah illaa Abu Dhabi ee Imaaraadka, waxaa uu xambaarsan yahay 2 Bilyan cubic feet of gas ah .
Xidhitaanka Telefishinka Al-jazeera ama badalidda siyaasadda tifaftirka.
In ay xidhiidhka u jaraan Ikhwaanka Musliinta, Xamaas iyo kooxaha kale.
In ay Xidhiidhka u jarto dalka Iran
In ay Siyaasadaheeda la Jaan-qaadaan Khaliijka
In ay dalka Masar faragelinta ka deyso
In ay xidhaan xisaabaadka Bangiyada ee Xamaas.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/doha.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-06-09 11:07:472017-06-09 11:07:47Waa Maxay Sababta ay Qadar ugu dhuti doonin go’doominta dalalka khaliijka?
AKHRISO: Sacuudiga oo Dab ku shiday Khilaafka Qatar, Soona Bandhigay Magacyo... Daawa naxdinta iyo Maroora Dilaac Haysta Dhalinta Soomaaliyee ee dalka Liib...